श्रीमानको कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि श्रीमतीले भनिन् - \_'लडाईं समाप्त भयो\_' Canada Nepal
राष्ट्रपति सी जिनपिङले भने, चीन अब कुनै प्रकारको शीतयुद्ध चाहँदैन
श्रीमानको कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि श्रीमतीले भनिन् - \_'लडाईं समाप्त भयो\_'
चैत्र ११ २०७६
काठमाडौं - विश्वभरि महामारीका रुपमा फैलिँएको कोरोनाभाइरस हालसम्म विश्वका १९२ भन्दा बढी देशमा फैलिएको छ । कोरोनाभाइरसकै कारण संक्रमितको संख्या र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि अहिले विश्व नै त्रसित बनिरहेको छ । कोरोनाको संक्रमण विश्वका शक्तिशाली देशमा बढी देखिएको छ । यस्तै शक्तिशाली देश मध्येको अमेरिकामा पनि कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण ५८२जनाको मृत्यु भइसकेको छ । भने हालसम्म ४५ हजार २६८ जना सङक्रमित भएका छन् ।
यस्तै अमेरिकामा कोरोनाको कम परीक्षण भएको खबर पनि आइरहेका छन् । अमेरिकाका एक यस्ता व्यक्ति पनि छन् जसको कोरोनाको परीक्षण गर्न डाक्टरले तीन पटकसम्म अस्विकार गरेका थिए । अमेरिकाको मिसौरीका ७४ वर्षका डेनिस विलसन बिरामी भएपछि पहिलो पटक अस्पताल पुगे । तर उनको अस्पतालमा उपचार भएन ।
उनकी श्रीमतीका अनुसार डेनिस डाक्टरलाई भेट्न तीन पटक अस्पताल गएपनि उनको उपचार गरिएन । कोरोनाको लक्षण नदेखिएको भन्दै डाक्टरले हेर्न मन गरेनन् । उनी निकै बिरामी भएपछि एम्बुलेन्समा अस्पताल लगियो । तर उनको गएको शनिवार मृत्यु भयो ।
डेनिसको एक्सरे परीक्षण गर्दा उनी निमोनियाबाट पीडित भएको देखियो । परीक्षण गर्दा पछि उनको कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । धेरैले उनको उपचार नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । डेनिसको मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमतीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखिन्, ‘लडाईं समाप्त भयो ।’
चैत्र ११, २०७६ मंगलवार १०:००:०० बजे : प्रकाशित
रुघाखोकी लागेको हो वा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको हो, कसरी छुट्याउने ?
बीबीसी। जाडो याममा र अघिपछि पनि तपाईँ हाम्रो नाक बन्द हुने वा नाकबाट पानी बग्ने, घाँटी दुख्ने र खोकी लाग्ने भइरहन्छ। तर चिसो लागेको हो कि रुघाखोकी हो? कि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नै हो? कसरी छुट्याउने त?
यो भिडिओ सामग्रीले तपाईँलाई सघाउन सक्छ।
आश्विन ७, २०७७ बुधवार १०:५३:३१ बजे : प्रकाशित
# कसरी छुट्याउने
गुमनाम गुर्जो घरघरमा: किन खाने, कति खाने र कसरी खाने ?
बीबीसी। काठमाण्डूको ठमेलमा जन्मिएकी पुनम प्रधान घरअगाडिको बकाइनोको रुखमा झाँगिएको गुर्जो हेरेर हुर्किइन्। धेरै लहरा हुने र सजिलै झाँगिने गुर्जो बारीबाट हटाउन दुख भयो भन्दै उनकी आमा गुनासो गर्थिन्।
अहिले कोरोनाभाइरसको कहरमाझ एकाएक चर्चा हुनथालेपछि पुनमले आफन्तको घरबाट गुर्जोको डाँठ मात्रै ल्याएकी छैनन्, यसको बिरुवा पनि बालकुमारीस्थित घरमा रोपेकी पनि छन्। “यसको फाइदाको कुरा थाहा पाएँ। अहिले हामी परिवार नै दैनिक खान थालेका छौँ,” इन्टेरियर डिजाइनर प्रधानले भनिन्। पुनमको घरमा मात्रै होइन अहिले गुर्जोको प्रयोग धेरै घरमा हुन थालेको छ।
सहरमा बस्ने कतिले गाउँबाट मगाउन थालेका छन् भने कतिले किनेर गुर्जोको रस पिउन थालेका छन्। कुनै बेला गाउँघरतिर बस्तुभाउलाई दिइने गुर्जोको प्रयोगप्रति कोरोनाभाइरसको महामारीपछि मानिसहरूको चासो बढ्न थालेको आयुर्वेदका वरिष्ठ चिकित्सक डा. ऋषिराम कोइराला बताउँछन्।
“हामी सानो छँदा गाउँघरतिर दुध धेरै दिन्छ भनेर गाईबस्तुलाई खुवाउने गर्थ्यौँ। पछि अध्ययनका क्रममा मैले यसमा भएको गुणकारी तत्वले शरीरका विकारहरू निकाल्न मद्दत गर्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने र पाचनशक्ति सबल बनाउने फाइदाबारे थाहा पाएँ,” डाक्टर कोइरालाले बीबीसीलाई भने।
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण यसको फाइदाबारे मानिसहरूले धेरै थाहा पाउन पाएको र महत्त्व बुझेको उनले बताए। कतिपय प्रयोगकर्ताहरू भारतीय योगगुरु रामदेवले यसको फाइदाबारे बताएपछि खोजेर खान थालेको बताउँछन्।
कोइरालाका अनुसार कोरोनाभाइरसअगाडि पनि ज्वरो आउँदा, जन्डिस हुँदा, हाडजोर्नी वा क्यान्सरको समस्या भएका बिरामीलाई खान दिइन्थ्यो। दक्षिण एशियाका भारत र श्रीलङ्कामा पाइने गुर्जो नेपालको पनि तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्मै पाइने आयुर्वेदका चिकित्सकहरू बताउँछन्।
रोगसँग लड्ने प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउने भएकोले गुर्जो खाँदा सङ्क्रमणबाट जोगिन मद्दत पुग्ने कोइराला बताउँछन्। “गुर्जो बहुउपयोगी जडिबुटी हो। यसको अवगुण वा शरीरलाई अन्य असर गर्ने तत्व नभएकोले यो खाँदा फाइदा हुन्छ,” उनले भने।
“यसमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट गुणका कारण कतिपय मानिसले यो खाएपछि अलि कमजोर भएको महसुस गर्न सक्छन्। त्यस्तो भए मह मिसाएर खाँदा हुन्छ।” उनका अनुसार यसले शरीरमा चिनीको मात्रा थोरै घटाउन सक्छ। तर त्यो असर लामो समय रहँदैन।
गुर्जो कति र कसरी खाने?
चिकित्सक कोइरालाको सुझाव यस्तो छ: गुर्जो नेपाली बजारमा धूलो वा डाँठका रूपमा उपलब्ध हुन्छ।
धुलो खाने भए पाँचग्राम गुर्जोको पाउडर दुई गिलास पानीमा हालेर उमाल्ने अनि एक चौथाइ भएपछि छानेर वा नछानेरै दिनमा एकपटक खान सकिन्छ। डाँठ छ भने बूढीऔँला जतिको मोटाइ र त्योभन्दा थोरै कम लम्बाइ भएको गुर्जोलाई थिचेर टुक्रा बनाउने अनि पानीमा उमालेर आधा घटाइ दिनको एक कप खान सकिन्छ। गुर्जो खाना खानुभन्दा अघि खाँदा त्यसले फाइदा गर्छ।
आश्विन ६, २०७७ मंगलवार १३:४०:४७ बजे : प्रकाशित
# किन खाने, कति खाने र कसरी खाने
वैज्ञानिकहरूले भने, समय बित्दै जाँदा कोरोनाबाट फोक्सो र मुटुमा भएको क्षति आफैँ निको हुन्छ
काठमाडौँ। समय बित्दै जाँदा कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट फोक्सो र मुटुमा भएको क्षति आफैँ निको हुने वैज्ञानिकहरूले दावी गरेका छन् । कोरोनाभाइरसका बिरामीको फोक्सो र मुटुमा ठूलो क्षति हुने र मानिसलाई दीर्घकालीन असर गर्ने भनिएका बेला वैज्ञानिकहरुले उक्त दावी गरेका हुन् ।
कोरोना संक्रमणबाट फोक्सो र मुटुमा भएको क्षति समय वित्ने क्रमसँगै सुधार हुने तथ्य पत्ता लगाएको अष्ट्रियाका वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । युरोपियन रेस्प्रेरेटरी अन्तर्राष्ट्रिय कांग्रेसमा प्रकाशित शोधमा विश्वविद्यालय क्लिनिक इन्सबार्कका वैज्ञानिकहरूले सो कुरा पत्ता लगाएका हुन्।
अष्ट्रियाको टायरोलिन हटस्पटका एक सय पचास कोरोना बिरामीहरुमा गरिएको अध्ययनपछि अनुसन्धानकर्ताहरूले सो दाबी गरेका छन्। वैज्ञानिकहरूले निको भएका छैठौं, १२औं, २४औं हप्ताका बिरामीलाई स्वास्थ्य परीक्षणको लागि बोलाएर उनीहरुको हृदयको दरको स्थिति, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा, रगतमा कार्बन डाइअक्साइड, फोक्सोको कार्य गर्ने क्षमता पत्ता लगाउन सीटी स्क्यान र इकोकार्डियोग्राम गरेका थिए।
पहिलो परीक्षणमा आधा दर्जनभन्दा बढी मानिसहरूले श्वासप्रश्वासको साथै खोकी लाग्ने समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । त्यसैगरी सीटी स्क्यान गरेर फोक्सोलाई ८८ प्रतिशत हानि भएको देखियो। यसैगरी, १२ औं हप्ता आइपुगेका बिरामीको परीक्षण गर्दा फोक्सोमा ८६ प्रतिशतबाट घटेर ५६ प्रतिशतमा आएको देखियो ।
त्यस्तै, ४८ जना बिरामीहरूमा मुटुको अस्वस्थता देखिएको थियो तर त्यो खतरनाक नभएको वैज्ञानिकहरूले दावी गरेका छ। ति, बिरामीहरुको पनि समयको साथ मुटुको अवस्थामा सुधार देखिएको थियो।
भाद्र २९, २०७७ सोमवार ११:०८:५९ बजे : प्रकाशित
सुत्नु अघि भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा
काठमाडौँ। कतिपय मानिसलाई सुत्ने बेलामा धेरै असहज महसुस गर्छन् । यसको प्रमुख कारण हो, सुत्नु अघि खाइएको खानेकुराहरु । धेरैजसो व्यक्तिहरुलाई बेलुका जंक फुड मात्रै होइन विभिन्न पोशक तत्व भएको हरियो सागशब्जी पनि खानु हुँदैन भन्ने थाहा नहुन सक्छ । सुत्नु अघि हरियो सागशब्जी खाँदा कतिपयलाई असहज महसुस गराउन सक्छ ।
ब्रोकाउली र बन्दाकोबी : एक नयाँ अनुसन्धानअनुसार ब्रोकाउली र बन्दाकोबीमा भरपुर मात्रामा भिटामिन पाइन्छ । तर यसमा हुने अघुलनसिल फाइबरलाई पचाउन निकै समय लाग्ने गर्दछ र असहज महसुस हुन्छ। त्यसैले सुत्नु अघि यी शब्जी खानुहुँदैन।
चिज : चिजको सेवन रातको खानामा गर्नु हुँदैन, किनभने यसमा टायरामाइन र एमिनो एसिड पाइन्छ। यसले पेट दुख्ने र पोल्ने समस्या हुने गर्दछ।
मदिरा : हुन त मदिराको सेवनले राम्रो निन्द्रा लाग्छ भनिन्छ, तर यसले शरीरमा नकारात्मक असर गर्दछ र बिस्तारै बिस्तारै निन्द्रा नलाग्ने समस्या सुरु हुन थाल्छ।
कफी : कफी पिउनु मानिसको बानी मात्र नभई एक किसिमको नशा पनि हुन्छ । कफीमा क्याफिन नामक तत्व पाइन्छ, जसले निन्द्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ। सुत्नु अघि कफीको सेवनले मानिसलाई धेरै बेर निन्द्रा नलाग्न सक्छ र शरीरको सिस्टम नै बिग्रिन सक्छ।
डार्क चकलेट : डार्क चकलेटमा क्याफिन र एमिनो एसिड दुवै पाइन्छ। जसले शरीरलाई निकै ऊर्जा दिने हुनाले डार्क चकलेट्को सेवन दिउँसो मात्र गरेको राम्रो हुन्छ ।
सुन्तलाको जूस : सुन्तलाको जुस शरीरका लागि निकै नै फाइदाजनक हुने गर्दछ । बिहान ब्रेकफास्टमा पिउँदा भरपुर ऊर्जा मिल्ने गर्दछ। तर सुत्नु अघि यसको सेवनले निन्द्रा नलाग्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ।
रातो मासु : रातो मासुमा अत्यधिक प्रोटिन पाइन्छ, जुन बेलुका मानव शरीरलाई पचाउन निकै बेर लाग्छ। जसले सुत्ने बेला अप्ठ्यारो हुनुका साथै निन्द्र नलाग्ने समस्या हुन थाल्छ।
टमाटरको सस : टमाटरको सस प्रायजसो मानिसले निकै रुचाउने गर्दछन् । यसमा धेरै मात्रामा एसिडिटी भएको कारण खाएपछि कहिले काहीँ अपच हुने र छाती पोल्ने समस्या हुन सक्छ। डाइटिशियनको सल्लाहअनुसार यदि बेलुकाको खानामा टमाटरको सस सेवन गरेमा कम्तिमा तीन घण्टापछि मात्र सुत्न जाँदा राम्रो हुन्छ ।
पानी : राती अत्याधिक पानी पिउनाले पटक पटक शौचालय जानु पर्ने हुन्छ, जसले निन्द्रा खराब हुनसक्छ। त्यसैले पानी दिउँसोको समयमा पिएको राम्रो हुन्छ।
भाद्र २८, २०७७ आइतवार १९:४०:५८ बजे : प्रकाशित
# भुलेर पनि
# राति भुलेर पनि नखानुहोस् यी चीज
कोरोनाभाइरस महामारीका बेला मानसिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउन के-के खाने ?
बीबीसी। कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। सही तरिकाको पोषण खान सके यस्तो समयमा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिने र तनाव समेत घटाउन सकिने पोषणविद्हरू बताउँछन्।
हेर्नुस् पोषणविद् सुप्रिया भट्टराईसँग बीबीसीले तयार परेको भिडियो
भाद्र २८, २०७७ आइतवार ११:५१:५८ बजे : प्रकाशित
राजमाका अद्भुद फाईदा
गेडागुडीहरु मा राजा भानेर चिनिने र मानिसहरुले अत्याधिक मनपराउने सब्जी हो राजमा। स्वदेश होस् या विदेश, बच्चा हुन् या बृद्ध सबको रोजाइमामा पर्छ राजमा। राजमा मा भरपुर मात्रामा स्वाद सहित विभिन्न पोषाक तत्वहरु जस्तै फाइबर,भिटामिन के, बी,म्याग्नेसियम र आइरन पाइन्छ। नेपाल लगायत इन्डिया र मेक्सिकन हरुले राजमा अत्यन्तै रुचाउने गर्दछन। हुनत मानिसले प्रायजसो स्वाद को कारणले मात्र राजमा खाने गर्दछन। तर यसका अनेकौ फाइदाहरु छन् जुन मानव शरीरका लागि निकै नै महत्वपुर्ण छन्।
- क्यालोरीको सहि मात्रा : राजमामा पाइने क्यालोरी बच्चा देखि बृद्ध सबका लागि पर्याप्त हुने गर्दछ। मानिसले आफ्नो स्वाद बमोजिम यसको तरकारी, सलाद वा सुप बनाएर खान मिल्ने राजमा तौल नियन्त्रण गर्नका लागि पनि लाभदयाक हुन्छा।
- पाचनकृया : राजमामा अधिक मात्रामा फाइबर हुन्छ जसले पाचनकृयालाइ सहि सन्तुलीत राख्दछा। साथै यसले ब्लड सुगरको स्तर पनि नियंत्रण राख्न मदत गर्दछ।
- मस्तिष्क को लागि असरदार : राजमामा भरपुर मातत्राम भिटामिन के र बी पाइन्छ जुन दिमागको लागि फाइदाजनक हुने गर्दर्छ। यसले नर्वस सिस्टम लाई बुस्ट गर्नुका साथै मस्तिष्कलाइ पोषण दिने कार्य गर्दछ।
- कोलेस्ट्रोल को सहि स्तर : राजमामा भरपुर मात्रामा म्याग्नेसियम पाइन्छ जसले कोलेस्ट्रोल नियंत्रण गर्ने कार्य गर्दछ। साथै यसले मुटु संग सम्बन्धित रोगहरु संग पनि लड्न मदत गर्दछ।
- तागतको अद्भुत श्रोत :राजमामा भरपुर मात्रामा आइरन पाइने हुदा यसले शरीरलाई आवश्यक तागत दिने गर्दछ। शरीरको मेटाबोलिजम र उर्जाका लागि चाहिने आइरन राज्माको सेवनद्वारा पुरा गर्न सकिन्छ। साथै यसले शरीरमा अक्सिजनको सर्कुलेशन पनि बढाउने गर्दछ।
भाद्र २६, २०७७ शुक्रवार १९:४६:५४ बजे : प्रकाशित